बडा दशैँ जनजातिको हैन भन्नु भ्रम हो, दशैँ जनजातिको हैन भन्ने प्रचार गर्ने क्रिस्चियन हुन् ! « Etajakhabar
बडा दशैँ जनजातिको हैन भन्नु भ्रम हो, दशैँ जनजातिको हैन भन्ने प्रचार गर्ने क्रिस्चियन हुन् !
प्रकाशित मिति : १५ आश्विन २०७६, बुधबार २२:१८
जगमान गुरुङ – दसैँ धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्व हो । दसैँमा शक्तिको उपासना हुन्छ । नेपालमा दसैँमा हिन्दूको उपासनाको विधिको वर्चस्व रहेको छ । जनजातिले पनि हिन्दूको दसैँ हो भन्ने बुझेका छन् । जनजातिमा हाम्रा पुर्खा मैषासुर हुन्, पूर्खालाई पराजित गरेर दसैँ मानिएको भन्ने बुझाइका कारणले पनि दसैँ तथा दसैँको टीका जनजातिले कुनै समय बहिष्कार गरेका हुन् ।
ब्राह्मण बाहिरी खण्डमा पाठ गर्छन् । गोरखाको कालिका मन्दिरमा मगरको अग्राधिकार छ । स्याङ्जाको आलमदेवी मन्दिरमा मगर पुजारी छन् । दाङको बाराही मन्दिरमा मगर पुजारी छन् । राजविराजको राजदेवीमा पुजारी थारु, काठमाडौँको शोभा भगवती र भद्रकालीमा वज्राचार्य पुजारी छन् ।
दसैँमा विशेषगरी गण्डकी प्रदेशका कोतमा मगर र ब्राह्मण पुजारी छन् । मगर पुजारी छन् भने ब्राह्मण पुरोहित छन् । काली स्थापना गरेको ठाउँमा महाअष्टमीको कालरात्रिको मध्यरातमा मगर पुजारीले केराको पातमा भातको जाँड कालीलाई चढाउने चलन छ ।
नेपालमा मानिने विभिन्न धर्म–संस्कृति तथा आदिवासी जनजातिबीच द्व न्द्व गराइदिएपछि एकआपसमा द्व न्द्वमा फँस्छन् र क्रिस्चियनको वर्चश्व हुन्छ भन्ने उद्देश्यले धर्म–संस्कृतिका बारेमा गलत प्रचार भएको हो ।
मतवाली र तागाधारीबीचको आन्द्रा काटिदिएपछि मान्छे मर्ने भएकाले अहिले विवाद ल्याएर आन्द्रा का टिदिने अहिलेको खेल हो ।
नालापानीको लडाईंमा पानीको स्रोत का टिदिएर नेपालीलाई प्याक प्याक पारेजस्तै हिन्दू धर्मको ज्ञानको स्रोत पनि का टिदिने खेल भइरहेको छ ।
चरेशको थालमा, ढुङ्गामा अक्षताले पूजा गरेर बोकालाई भोग दिइयो र त्यही बोकाको र गत चामलमा हालेर टीका लाउन थालियो । नेपालका आदिबासीले र गतको टीका पछि मात्र लाउन थालेका हुन् ।
दसैँमा बलि चढाइँदा पशु अधिकारकर्मीले आवाज उठाउनु सही हैन । इस्लाम तथा इसाइ धर्मावलम्बीमा पनि का टमा र गर्ने चलन छ । इस्लामले उँट का ट्छन् भने क्रिस्चियनले ट र्की (सुतुरमूर्ग) काटेर आफ्नो पर्व मनाउने चलन छ ।
नागरिकन्युजबाट, प्रकाशित मिति : २ कार्तिक २०७५, शुक्रबार
२६ श्रावण २०७७, सोमबार १६:२९
१६ श्रावण २०७७, शुक्रबार ११:०५
३० असार २०७७, मंगलवार १८:५८